တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့၌ COVID-19 ရောဂါ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် မြို့လုံးကျွတ် စစ်ဆေးမှုများ ပြီးဆုံး - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့၌ COVID-19 ရောဂါ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် မြို့လုံးကျွတ် စစ်ဆေးမှုများ ပြီးဆုံး
News Social, Education & Health မြန်မာ-ENG
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူပေပြည်နယ် ဝူဟန်မြို့ လူနေရပ်ကွက်တစ်ခု၌ ဩဂုတ် ၃ ရက်တွင် COVID-19 nucleic acid စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ဒေသခံတစ်ဦးထံမှ swab နမူနာရယူနေသော ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဝူဟန် ၊ ဩဂုတ် ၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဝူဟန်မြို့၌ နောက်ဆုံး COVID-19 ရောဂါ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ငါးရက်အတွင်း အားလုံးပါဝင်သည့် nucleic acid စစ်ဆေးခြင်း အဆင့် ပြီးဆုံးခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ဩဂုတ် ၈ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ဝူဟန်မြို့ရှိ နေထိုင်သူ ၁၁ ဒသမ ၂၈ သန်းကျော်အား ဩဂုတ် ၃ ရက်တွင် စတင်သည့် မြို့လုံးကျွတ် စစ်ဆေးမှုအတွင်း နိုဗယ်လ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း ဝူဟန့်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဒုတိယ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Li Tao က ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းမှာ နွေရာသီအားလပ်ရက်သွားရောက်နေသော တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ နှင့် အသက် ၆ နှစ်အောက် ကလေးများမှလွဲ၍ ဝူဟန်မြို့၌ နေထိုင်သူများအားလုံး “အခြေခံအားလုံး လွှမ်းခြုံမှုအပြည့်”ဟု ဆိုလိုကြောင်း ၎င်း၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ဩဂုတ် ၂ ရက်က ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအချို့အကြားတွင် ပြည်တွင်းရောဂါကူးစက်မှုအသစ်များ ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက် အစုပြုံလိုက် စစ်ဆေးမှုများအား စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဩဂုတ် ၇ ရက်တွင် ဝူဟန်မြို့၌ နောက်ဆုံး ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွင်း ပြည်တွင်းရောဂါကူးစက်သူ ၃၇ ဦး နှင့် ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲ သယ်ဆောင်သူဖြစ်သော ပြည်တွင်းရောဂါကူးစက်သူ ၄၁ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သီးသန့်စီမံထားရှိသော လူနေအိမ်ရာဝင်းများအတွင်း အစုပြုံလိုက်စစ်ဆေးမှုများတွင် ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူ ၉ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ရောဂါရှိသူများနှင့် အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့၍ Quarantine ဝင်ရောက်သူများအကြား အခြားလေးဦး တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း မြို့တော်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကော်မရှင်၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး Peng Houpeng က ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အစောပိုင်းတွင် COVID-19 ရောဂါ အပြင်းအထန် ခံစားခဲ့ရသည့် ဟူပေပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဝူဟန်မြို့သည် ကျယ်ပြန့်သော nucleic acid စစ်ဆေးခြင်း လှုပ်ရှားမှုအား ပြီးမြောက်သည့် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး မြို့ကြီး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကပ်ရောဂါ မြင့်နေချိန်တွင် ၁၉ ရက်အတွင်း နေထိုင်သူ ၁၀ သန်းနီးပါးအား စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဝူဟန်မြို့သည် COVID-19 ရောဂါ ပြည်တွင်းကူးစက်သူ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရခြင်း မရှိသည်မှာ တစ်နှစ်ကျော်ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
China’s Wuhan completes citywide testing to curb COVID-19 resurgence
WUHAN, Aug. 8 (Xinhua) — The central Chinese city of Wuhan has completedaround of all-inclusive nucleic acid testing within five days to contain the latest COVID-19 resurgence, local authorities said Sunday.
More than 11.28 million residents in the megacity have been tested for the novel coronavirus during the citywide testing that started Tuesday, Li Tao, deputy secretary-general of the Wuhan municipal government, toldapress conference on Sunday. This meansa“basically full coverage” of all residents in Wuhan, except for children under six and university students away on summer vacation, according to Li.
The mass testing was launched after new locally transmitted infections emerged among several migrant workers on Monday.
By Saturday, Wuhan had registered 37 locally transmitted confirmed cases and 41 locally transmitted asymptomatic carriers in the latest outbreak.
Hit hard by COVID-19 in early 2020, Wuhan, capital of Hubei Province, was the world’s first megacity to completeacomprehensive nucleic acid testing campaign, testing nearly 10 million residents in 19 days at the height of the pandemic.
Hard hit by COVID-19 in early 2020, Wuhan, capital of Hubei Province, was the world’s first megacity to completeacomprehensive nucleic acid-testing campaign last year.
The city had not reported any locally transmitted COVID-19 infections for overayear. Enditem
Photo – A medical worker takesaswab sample fromaresident for COVID-19 nucleic acid testing ataresidential community in Wuhan, central China’s Hubei Province, Aug. 3, 2021. (Xinhua/Xiong Qi)
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ နောက်ထပ်ပြည်နယ် မြို့တော်အား တာလီဘန်က စီးနင်း
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် တစ်ရက်တည်း အရပ်သား ၁၁ ဦးသေဆုံး ၊ ၆၄ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ